Nhau - Ceiling Mount Mhepo Disinfection Sisitimu Yakavakirwa paUVC LED kuti ishandiswe muZvikoro
Energy Harness, yePurdue University yakabatana nemwenje yemwenje inogadzira inogadzira mweya inouraya utachiona iyo inogona kusungirirwa padenga kuchenesa mweya kubva kumusoro kwechikamu chemwenje neUVC mwenje inounzwa neakaisirwa maLED.
Sekureva kwePurdue University, chishandiso chakagadzirirwa kushandisa kushanda kweUVC mwenje mukuuraya iyo SARS-COV-2 mhuri yezvirwere. Patricio M. Daneri, director director we Energy's Midwest division, akati, “Yedu Inoshanda Yemhepo chikamu chinopa mukana wakawedzerwa wekushandisa zvakanaka mukati mezuva rechikoro mumakamuri ane vanhu. Chikwata ichi chine feni yekudhirowa mudenga, kwainocheneswa uyezve kuchovha bhasikoro kudzokera mumba. ”
Iyo kambani inoronga kuisa siringi mount mhepo disinfection system yegore rinouya rechikoro kwezvikoro zviviri zviri pakati Indiana State muUS.
Vazhinji vaongorori vakaratidza kuti mwenje weUVC unogona kudzikisira hutachiona hwe COVID-19. Mhando dzakasiyana dzekushandisa dzinoenderana neUVC tekinoroji yeUSD yakavambwawo kudzivirira kupararira kwechirwere. Kuongororwa kweLRC kwakaratidza kuti zvigadzirwa zvepamusoro-zvemukati zvekuchenesa mweya ndizvo zvinonyanya kuzivikanwa hutachiona hwehutachiona pakati pevatengi panguva iyoyo.
Vanhu kazhinji vanoziva chete kuti UV mwenje inokwanisa kuuraya mabhakitiriya nemavhairasi, asi ivo havazive nezve iyo ruzivo nezve wavelength kana ililluminance. Kune vagadziri vanga varonga kupedza kugadzirwa kwechiedza chakajairika, iyi yeUVC maitiro emarambi inova kushamisika kukuru. Tora Signify semuenzaniso, iri kukudza zvigadzirwa zvemitsara uye mitsara uye yakasimwa UV mugadziri wemwenje, GLA, muNetherland, zvichiratidza kuti kupisa kweUVC kwakajairika mwenje hakuzopera muchidimbu.